शाहरुख भन्छन्, परिश्रम हरेक समस्याको समाधान हो ! » KhabarPati.net
शाहरुख भन्छन्, परिश्रम हरेक समस्याको समाधान हो !
१२ श्रावण २०७८, मंगलवार ११:४३ प्रकाशित
उनी आफ्नो जन्मदिन वा यस्तै अवसरमा कुनै न कुनै प्रेरणादायी प्रसंग सुनाउने गर्छन् । एकपटक उनले आफ्नो जन्मदिनमा बालबच्चा र अभिभावकबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गरे । यहाँ उनको भोगाई र बुझाई प्रस्तुत गरिएको छ ।बच्चालाई भन्छु, कडा परिश्रम गरपहिला म प्रार्थना गर्थें कि, धेरै राम्रो काम गरौं । धेरै पैसा कमाउँ । धेरै नाम कमाउँ । तर, अब म प्रार्थना गर्छु कि, मेरा बच्चा सधै स्वस्थ्य रहोस् । राम्रो होस् । उनीहरुले नाम कमाउन्, पैसा कमाउन् ।यो सत्य हो कि, जब बच्चा ठूला हुन्छन् । हुर्कन्छन् । उनीहरुबाट हामीले केहि न केहि सिकिरहेका हुन्छौ । उनीहरुको जीवनबाट उर्जा प्राप्त गरिरहेका हुन्छौ । खुसी प्राप्त गरिरहेका हुन्छौ । अहिलेका बच्चा त स्मार्ट हुन्छन् । उनीहरु कुनै सधै अग्रसर र इमान्दार रहने प्रयास गर्छन् ।
मैले पनि आफ्ना दुई ठूला बच्चा आर्यन र सुहानाबाट स्ट्रेट फरवार्ड कुरा गर्न सिकेको छु । मेरो सानो छोरा त अहिले पनि निकै सानै छ । मैले देखेको छु कि, बच्चाहरु आपसमा एकदम स्पष्टसँगले कुराकानी गर्छन् । उनीहरुमा छलकपट हुँदैन ।कुनै कुरा अस्विकार गर्नमा पनि कतिपनि हिचकिचाउँदैनन् । मलाई त कुनै कुरा अस्विकार गर्नु दुई दिन लाग्छ । तर, यी बच्चामा एकदमै आत्माविश्वास हुन्छ ।यदि कसैले भन्यो, ‘तपाईको हेयरस्टाइल राम्रो देखिएन ।’ तब म एकदमै डिस्टर्ब हुन्छु । त्यसलाई ठिक गर्नतर्फ लाग्छु । तर, बच्चाहरु यस्ता कुरामा खास ख्याल राख्दैनन् । मलाई लाग्छ कि, आउनेवाला पुस्ता इमान्दारी हुनेछन् ।
जब यत्तिका मानिसहरु आउँछन्, भेट्छन्, मित्रता गाँस्छन्, राम्रो कुरा गर्छन् । यसबाट पोजेटिभ इनर्जी आफै पैदा हुन्छ । तर, कुनैपनि खुसी वा सफलतालाई सन्तुलित राख्न सक्नुपर्छ । आफ्नो धरातल भुल्नु हुँदैन । किनभने मानिसको दिमाग खराब हुन समय लाग्दैन ।आफ्नो परिवार पनि राम्रो र सकारात्मक हुन जरुरी छ । जस्तो कि, सबैलाई थाहा छ म एक मध्यमबर्गिय परिवारका हुँ । त्यसैले मेरा लागि पारिवारिक मूल्यले धेरै महत्व राख्छ ।म आफ्नो बच्चालाई भन्छु कि, जिन्दगीमा सामान्य हुन सिक । तिमी जति साधरण हुने प्रयास गर्छौ, जीवन उत्तिनै सजिलो हुनेछ ।
म सधै हार्ड वर्कमा विश्वास गर्छु । मैले त यहि सिकें कि, मिहेनत गरौ, राम्रो फल प्राप्त हुन्छ । मलाई लाग्छ, श्रम हरेक समस्याको समधान हो ।कतिले मलाई भन्छ, ‘धेरै काम गरेको छौ, पैसा कमायौं, नाम कमायौ, अब किन यतिधेरै मिहेनत गर्छौ ?’तर, मेरो लागि काम एकदमै जरुरी छ । यदि मैले काम गरिनँ भने म बिमार हुन्छु । मलाई काम गर्न राम्रो लाग्छ । मलाई काम गर्ने बानी छ ।म बच्चालाई सुख सयलमा बस वा श्रम नगर भनेर भन्दिन । आफ्नो बच्चालाई पनि हार्ड वर्क गर्नका लागि प्रेरित गरिरहन्छु । म अहिले जुन स्थानमा छु, त्यो मेरो हार्ड वर्ककै कारण भएको हुँ भनेर भन्ने गरेको छु ।